SAWIRRO: Ciidamada Haramcad oo la wareegay fariisimo ay xalay ka guureen mucaaradka – Calanka.com
SAWIRRO: Ciidamada Haramcad oo la wareegay fariisimo ay xalay ka guureen mucaaradka
Ciidamo ay hoggaaminayaan Jeneraalkii xilka iyo darajada laga qaaday ee Saadaq Joon iyo Yuusuf Indhacadde iyo waliba kuwo ilaalo u ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa xalay isaga guuray wadada aada Tarabuunka ee hor marta madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim ee degmada Hodan, halkaas oo sidoo kale hoy u aheyd maalmihii u dambeeyay siyaasi C/raxmaan Cabdishakuur.
Wararku waxa ay sheegayaan in ciidamadan ay u guureen xaafadda Siigaale iyo xaafado kale oo ku teedsan halkaas, waxa ayna ka sameeysteen dhufeyso cusub.
Weli lama oga sababta keentay inay halkaas isaga guuraan xiligan, balse saakay aroor ayaa waxaa fariisimadaasi la wareegay oo ciidii dhufeyska ay ka dhigteen ee laamiga ku daadiyeen ka qaaday ciidamada gaarka u tababaran ee Haramcad.
Warar kala duwan ayaa sheegaya in labada dhinac ay wadaan abaabul dagaal, waxaana la sheegayaa in ay magaalada Muqdisho soo gaareen qaar kalena kusoo wajahan yihiin ciidamada gaarka u tababaran ee dowladda ee Haramcad iyo Gorgor.
Arrintani ayaa kusoo beegmeysaa xilli uu ra`iisal wasaaraha ku baaqay in ay waajibaadkooda gutaan ciidamada qaranka.
Dhanka kale barakac ayaa waxaa uu saakay ka socdaa degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag, waxaana lagu arkayaa waddooyinka shacab qaabab kala duwan u qaxaya.